Kutadza Kuwedzera iyo folda. Iyo Seti ye Mafolda Haigone Kuvhurwa. Zvikanganiso Zvaigona Kuonekwa mufaira.
musha Products DataNumen Exchange Recovery Zvikanganiso Zvaigona Kuonekwa mufaira
Ruzivo rwakadzama nezve "Zvikanganiso Zvaigona Kuonekwa muFaira" Kanganiso
Paunenge uchishandisa Microsoft Outlook kuvhura kana kuwiriranisa offline fodhi (.ost) faira, iwe unoona inotevera yekukanganisa meseji:
Hatigone kuwedzera folda. Iyo seti yemafolda haigone kuvhurwa. Zvikanganiso zvaigona kunge zvakaonekwa mufaira xxxx.ost. Regedza ese maapplication-anotumirwa netsamba, wobva washandisa Inbox Kugadzirisa Turu.
kupi 'xxxx.ost'izita ra offline fodhi (.ost) faira yakagadzirwa neAptlook apo iri kushanda neExchange mailbox bhokisi pasina. Iwe unogona kunge usiri kujairana nefaira racho sezvo rakagadzirwa zvine mutsindo.
Kana zvako OST faira rinoora kana kukuvara, uye risingakwanise kugadziriswa neMicrosoft Outlook, inozivisa iko kukanganisa.
Kugadzirisa kukanganisa uku uye kudzivirira kurasikirwa kwedata, ndapota ita zvinotevera:
Vhara Microsoft Outlook uye chero mamwe maapplication anogona kuwana iyo OST ikwidzwe.
kuwana OST faira inokanganisa iko kukanganisa. Zvichienderana neruzivo rwuri mukukanganisa meseji, unogona kuwana iri faira nyore. Unogona zvakare kushandisa iyo kutsvaka shanda muWindows kutsvaga iyo OST ikwidzwe.
Dzosera iyo data rekunze muiyo OST ikwidzwe. The Exchange OST faira rine dhata risingabvumirwe, kusanganisira mameseji etsamba uye zvimwe zvese zvinhu, mubhokisi rako reExchange, izvo zvakakosha kwazvo kwauri. Kuti uwane uye ununure idzi dhata, unofanira shandisa DataNumen Exchange Recovery kuongorora iyo OST faira, dzoreredza iyo data mariri, uye wozvichengeta muAptlook PST faira kuitira kuti iwe ugone kuwana ese mameseji uye zvinhu zvine Outlook zviri nyore uye zvine mutsindo.
Backup iyo yekutanga OST ikwidzwe. Nekuda kwekuchengeteka, zvirinani uzvichengetedze.
Dzorerazve zita kana kudzima iro rekutanga OST faira inokonzera dambudziko.
Gadzirisa kukanganisa. Ita shuwa kuti marongero eakaundi yeemail muAptlook akarurama, uye Outlook inogona kubatanidza kune yako Exchange server nenzira kwayo. Ipapo restart Outlook uye tumira / gamuchira maemail ako pane inoenderana Exchange mailbox, inozotendera Outlook kugadzira itsva OST Faira otomatiki uye unganidza data rayo neExchange mailbox Kana iyi nzira ikasashanda, ipapo yako ikozvino tsamba mbiri haina kunaka, unofanira kuidzima uye ugadzire imwe nyowani, seinotevera:
6.1 Vhara Microsoft Outlook.
6.2 Dzvanya Start, uye ipapo tora Control Panel.
6.3 Dzvanya Chinja kuClassic View kana iwe uri kushandisa Windows XP kana yepamusoro shanduro.
6.4 Tinya kaviri tsamba.
6.5 Mu Tsamba Yetsamba dialog box, dikai Ratidza Maprofiles.
6.6 Sarudza imwe yeiyo isiriyo chimiro mune runyorwa wobva wadzvanya Bvisa kuti aibvise.
6.7 Dzokorora 6.6 kudzamara maprofile ese asiri iwo abviswa.
6.8 Dzvanya wedzera kugadzira nhoroondo nyowani uye wedzera maemail maakaunzi zvinoenderana nemaitiro avo pane server.
6.9 Start Tarisa uye dzokororazve yako Exchange mailbox, iwe uchaona dambudziko ranyangarika.
Tumira iyo data yakadzoserwa padanho rechitatu. Mushure meako OST dambudziko refaira rakagadziriswa, chengeta iyo nyowani OST faira yeiyo Exchange mailbox yakavhurika, uye wozovhura iyo PST faira inogadzirwa nhanho 3 neAptlook. Sezvo iine data rese rakadzorerwa mune yako yekutanga OST faira, unogona kuteedzera zvinhu zvinodiwa kune yako nyowani OST faira zvokusarudza.
DataNumen SQL Recovery 6.0 inoburitswa muna Chikumi 22, 2021
DataNumen Archive Repair 3.8 inoburitswa muna Chivabvu 16, 2021
DataNumen TAR Repair 3.0 inoburitswa muna Chivabvu 11, 2021